निर्यात किन घट्दै छ ? | गृहपृष्ठ
Home लगानी निर्यात किन घट्दै छ ?
on: १३ भाद्र २०७५, बुधबार १०:३८ लगानी
निर्यात किन घट्दै छ ?
कसरी बसाउने बलियो अर्थतन्त्रको जग ?
गत केही वर्षदेखि नेपाली अर्थतन्त्र उच्च आयात र न्यून निर्यातले आक्रान्त छ । अझ भनौं, हरेक आर्थिक वर्ष (आव) सकिन लाग्दा आयातको परिमाण बढी र निर्यातको परिमाण सोचेभन्दा कम देखिँदै आएको छ । यसले अर्थतन्त्रप्रति चासो राख्ने सबैलाई झस्काइरहेको छ ।
आव २०७४।७५ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको तथ्याङ्कमा नेपालको कुल निर्यात ७४ अर्ब ३१ करोड देखिएको छ । जबकी आयात ११ खर्ब ६ अर्ब ३५ करोड रहेको छ । नेपालले गत आवमा १ खर्ब ३३ अर्ब ४ करोड रूपैयाँको व्यापारघाटा बेहोरेको देखिन्छ ।
निर्यात गरिएका मुलुकमध्ये भारत, चीन र अन्य मुलुक गरी तीन वर्ग तोकिएको छ । भारतमा ४२ अर्ब ४५ करोड, चीनमा २९ अर्ब ९९ करोड र अन्य मुलुकमा २८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँको निर्यात भएको छ । गत आवमा चीनतर्पmको निर्यातमा ठूलो वृद्धि देखिएको छ । चीनतर्फ एक्कासि बढेको निर्यातको तथ्याङ्कलाई छोडेर विश्लेषण गर्ने हो भने समग्रमा अघिल्लो आव २०७३।७४ मा भन्दा गत आवमा निर्यात बढाउन सकिएको देखिन्न ।
अब एउटा प्रश्न आउँछ । आखिर नेपालले किन निर्यात बढाउन सक्दैन त ?
विगत ३ वर्षको निर्यातको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमै उत्पादन हुने तर प्रशोधन नहुने वा आंशिक प्रशोधन हुने वस्तुहरू पनि छन् । यिनमा मुख्यतः अलैंची, अदुवा, जडीबुटी, तारपिन, रोजिन, चिया, जूस, जूट निर्यात भएको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले निर्यातका लागि गरेका सबै पहलले पनि यो बढ्न नसकेको देखिन्छ । निजीक्षेत्रका छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा नेपाल उद्योग परिसङ्घले गरेका प्रयासले समेत उक्त क्षेत्रमा उपयुक्त परिणाम दिन सकेको छैन ।
यसको मूल समस्या भनेको अलैंची, अदुवा, जूस, जूट, जडीबुटीलगायत वस्तुको उचित बजारीकरण हुन नसक्नु नै हो ।
एक्कासि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उच्च मूल्यमा माग भइदिँदा हामीकहाँ किसान उत्पादनतर्पm आकर्षित हुन्छन् । तर, अर्काे सिजनमा किसानले उत्पादन बढाउँदा मूल्य घट्ने, विक्री नहुने अवस्था आउँछ । सस्तोमा बेचेको वस्तु निर्यात गर्दा सीमामा विभिन्न प्राविधिक समस्या उत्पन्न भइदिन्छ । नेपाली पक्षले जारी गरेको क्वारेण्टाइन प्रमाणपत्रलाई भारतीय तथा चिनियाँ पक्ष दुवैले मान्यता दिँदैनन् ।
यस्ता विविध कारणले पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उच्च माग भइरहँदा पनि यहाँबाट वस्तुहरू सहजै निर्यात हुन नसकेकाले किसान उत्पादनतर्फ आकर्षित नभएका हुन् । अर्को कुरा सोचेअनुसारको फाइदा नहुने र कहिले काँही त घाटा नै बहोर्नुपर्ने अवस्था पनि छ ।
वस्तु बजार ऐन तथा नियमावलीअनुसार बजार विकास गर्न सके नेपालमै उत्पादित वस्तुहरूको सङ्गठित बजार निर्माण हुनेछ । यसले वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण भई वस्तुको बजार प्रवर्द्धन, सञ्चालन यसका सदस्यले गर्ने भएकाले नेपालमा उत्पादित वस्तु अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उचित मूल्यमा बेच्न सकिनेछ ।
उत्पादित वस्तुको बजार एउटाभन्दा बढी भएमा विभिन्न सिजनमा हुने मागमा कमी आउने छैन । समग्रमा यस्ता गतिविधिले हाम्रा वस्तुहरूको निर्यात बढाउन सके हालको भन्दा धेरै गुणा निर्यात सजिलै बढाउन सकिन्छ ।
व्यापारघाटा कम गर्न र निर्यात बढाउन सरकारले जारी गर्ने वस्तु विनिमय बजारको यथोचित नियमन तथा प्रवद्र्धन गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ ।
सन् २०१७।१८ को कुल निर्यात ७४ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० दशमलव ४ प्रतिशतले बढी हो । (कुल आयात ११ खर्ब ६ अर्ब ३६ करोड छ जुन अघिल्लो आवभन्दा २३ दशमलव ५ प्रतिशतले बढी हो) त्यसमा नेपालमै उत्पादित वस्तुहरूको कुल निर्यात १६ अर्ब ८० करोड ६३ लाख रूपैयाँ छ । जुन कुल निर्यातको २२ दशमलव ६१ प्रतिशत हो ।
यी वस्तुको उत्पादन बढाई बजार तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्नाले निर्यात गुणात्मक रूपमा बढाउन सकिने अवस्था छ । उत्पादन बढाउनाले राष्ट्रमै स्वरोजगारको दर पनि बढ्नेछ । तेस्रो मुलुकमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्नाले विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत वृद्धि हुनेछ । वस्तु विनियम बजार नै नेपालको निर्यात अभिवृद्धि तथा व्यापारघाटा न्यूनीकरणको सबैभन्दा गतिलो अस्त्र बन्न सक्ने तथ्यलाई अब सरकार र नियामक निकायहरूले बुझ्नु अति आवश्यक छ । यसैका माध्यमबाट नेपालमै उत्पादित लाभका वस्तुहरूको निर्यातबाट मुलुक अर्थतन्त्र वृद्धि र समृद्धि निर्माणको बाटो खुल्ने देखिन्छ ।
प्रस्तुति : यती रिसर्च फाउण्डेशन